Xeer ku taariikhaysan August 21, 2019 ayaa cadeeyay habraacyada lagu hirgalinayo Pro-A, iyadoo looga baahan yahay wada-hawlgalayaasha bulshada inay ka gorgortamaan heerka laamaha xirfadeed ee heshiisyada go'aaminaya shahaadooyinka u-qalma nidaamka.
Markii la soo gabagabeeyo, heshiisyadan waxaa loo gudbiyaa Agaasinka Guud ee Shaqada kaas oo markaa u gudbaya kordhintooda iyagoo soo saaraya wareegto lagu daabacay Joornaalka Rasmiga ah.
Xusuusin ahaan, kordhintani waxay kuxirantahay u hogaansanaanta shuruudaha cadeynaya isbedel weyn oo ku yimaada waxqabadka gudaha waaxda ay quseyso. Halista xirfadaha gabow ee xirfadaha ayaa sidoo kale maamulka tixgeliyaa.
Waxay kuxirantahay qodobada lagu gorgortamay heerka laanta, waxay kuxirantahay Uniform si loo daboolo dhamaan ama qeyb kharashaadka waxbarashada, iyo waliba gaadiidka iyo hoyga kharashaadka kubixiyay Pro-A, iyadoo lagu saleynayo wadar isku mid ah Haddii heshiiska laanta ee ay fidisay Wasaaradda Shaqada ay bixiso, OPCO waxay ku dari kartaa caymiskeeda gunnada iyo sharciga iyo qandaraasyada bulsheed ee shaqaalaha, inta u dhexeysa xaddiga mushaharka ugu yar saacaddii.
Fiiro gaar ah: marka tababarku dhacayo inta lagu jiro waqtiga shaqada, shirkadda waxaa looga baahan yahay inay ilaaliso ...
Dib-u-tababarid ama dallacsiin iyada oo loo marayo barnaamijyo daraasad shaqo ayaa lagu daadiyaa laamaha July 10th, 2021Tranquillus
READ Aasaaska Mashruuca 2019 iyo Mashruuca Online (2019/365)
horeQalabka Mashruuca: hordhaca - Dejinta iyo Maalgelinta Mashruuca
socda30 milyan oo yuuro si loogu taageero shaqo wadaag